Haddii Ilaah waa u roon, Maxaad Ma Waxaa silica? – 2kalluunka
Home / Badbaado / Haddii Ilaah waa u roon, Maxaad Ma Waxaa silica?
Fall ee Man
Oo wuxuu kaloo sameeyey Aadan iyo Xaawo, waalidiinteena ugu horeysay, in ay boogeed xanuun iyo dhimasho.
Cabanaayo lagu casuumay dunida ugu soo galay markii ay dib ugu noqdeen on Ilaah. Marka dhinacaas laga eego, dhibaatada uu abuuray Ilaah kama iman, laakiin ninkii, ama, ugu yaraan, natiijo ah oo falalka Man ee.
Sababtoo ah kala Ilaah ka yimid keena Aadan iyo Xaawo ee caasinnimada, cirqiga aadanaha oo dhan ay soo martay dhibaato (arki Genesis 3:16 iyo Paul ee Warqad ku socota dadka Roomana 5:19).
Inkasta oo laga yaabaa in aan aqbalaan runta this sida article ah ee iimaanka, waxa hubaal ah ma samaysaa wax fudud in la dhibaatada nolosheena gaarka ah ka qaban. Ayaa la soo gudboonaadey dhibaato, Waxaa laga yaabaa in aan ka heli nafteena jirrabay su'aasha wanaaggii Ilaah iyo xataa jiritaankiisa aad. Weli runta ah arrinta waa Ilaah marnaba keena dhibaato, in kastoo jeer ayuu u sameeyey oggolaadaan waa in ay ka dhacaan.
Ilaah waa u roon by dabeecadda iyo, oo sidaas daraaddeed, awoodi karin sharka keenaya. Haddii uu shar u fasaxaya in ay ka dhacaan, Waxa uu had iyo jeer sidaas sameeya si ay u soo wanaagsan ka weyn (Eeg Paul ee Warqad ku socota dadka Roomana 8:28).
Tani waa kiiska in Fall Aadanaha: Ilaah noo ogol yahay in ay lumiyaan farxadda dunida of Eden oo kaliya si ay u heli karo noo, iyada oo allabarigii Wiilkiisa, haybad sare jannada.
Duceeya ee Garden of Getsemane habeenkii oo la xiray, Ciise naga siiyey tusaale kaamil ah sida aan u yihiin in ay fal markii dhibaato inoo yimaadoba. First uu Aabbaha codsaday in xanuunka isaga ka qaadan. Ka dibna wuxuu hadalkiisa ku daray, "Ma aha inaan doonistayda, laakiin kuwaagu, in la sameeyo " (Luke 22:42).
Si baryadan ku baryo waxay u baahan tahay isku halleeya weyn wanaag Ilaah: in uu doonayo noo farxad ka sii badan waxaan samayn iyo in uu si dhab ah u ogyahay waxa ugu wanaagsan noo. Waayo, waxaa inoo si loo ogaado, si lid ku ah, in Ilaah waa unloving ogolaaday dhibaatada waa in isaga xukumi ka our in dadku ku koobnayn. "Xaggee baad ahaayeen markii aan aasaaska dhulka dhigtay?"Waxa uu wax ka weyddiin laga yaabo oo naga mid ah. "Iisheeg, haddii aad leedahay faham " (Ayuub 38:4). si fudud Waxaan oo dhan ma ka arki kartaa in Ilaah arkaa. Waxaan aynan garan karin oo dhan siyaabo qarsoon by taas oo uu isticmaalaa xaaladaha loo kasin si wadid carruurta qalbigoodana Xaggii toobadda iyo in la gaaro in na kaamil ah ruuxiga ah. Inkasta oo aan u muuqdaan in ay qaldamaan arkaya nolosha this sida ugu dambayn wanaagsan, Ilaah arko sawirka ballaadhan, sawirka weligeed ah. Waxa uu ku habboonayn in our kama dambaysta wanaagsan fahamsan in ay ujeedada taas oo uu na abuuray,: in ay ku noolaadaan oo ku faraxsan isaga oo leh weligiis Jannada.
Si aad u soo galay joogitaanka Ilaah jannada waxay u baahan tahay in aan la bedelay: in dabeecadda aadanaha our dhacday in la sameeyo quduuska ah; Waayo, Qorniinku wuxuu leeyahay, "Waxba nijaas geli doonaan [Cirka]" (arki kitaabka Muujintii 21:27). (Wixii dheeraad ah oo ku saabsan mowduucaan, fadlan fiiri bogga on Purgatory, Dambi dhaaf & Cawaaqibta.
habka quduusnaanta Tani waxay ku lug dhibaatada. "Haddii aan Xabbad sarreen ah dhulka ku dhicin oo dhiman,"Ayaa sheegay in Ciise, "Keligeed bay iska jiraysaa; laakiin hadday dhimato, midho badan bay dhashaa. Kan naftiisa jecel, waa lumin doonaa, oo kan dunidan naftiisa ku nebcaadaase, wuu hayn doonaa tan iyo nolosha weligeed ah, waayo " (John 12:24-25).
Waa xanuun badan inaan goyn lifaaqan our loo baahnayn in waxyaalaha dunida this, laakiinse si aad abaalgud inaga mudan in dunida iman doonta oo qiimihiisu yahay kharashka. Ilmaha uurka ku jira xaqiiqada ah jeclaan lahaa inuu sii joogo yaqaano mugdiga ah ee uurkii hooyadiis. Waxa uu halkaas ku noolaa muddo sagaal bilood ah; waa wax dhb ah oo kaliya uu ogyahay. Si la qaadi meeshan raaxo leh ka oo keenay iftiinka dunidan waa xanuun. Oo weliba taas oo naga mid xun, ama xataa xusa, xanuun uu ku dhashay, inuu galo dunidan?
Sidaas badan ka yar our arrin xanuun dunida noo mar aan soo galay doonaa xaqiiqada dhabta ah ee Jannada. Wax kasta oo xanuunno badan aan laga yaabaa in hadda way raagtaa, ama adkaysan laga yaabaa in mustaqbalka, lana gargaarona in la ogaado in xanuunkii nolosha adduunyo uun tahay ku meel gaar ah si ay u-, aad, maalin mari-oo waa in farxadda Samadu waa dhamaystiran iyo weligeed ah.
The Book of Revelation (21:4) ayaa sheegay in, "[Ilaah] tirtiri doonaa indhahooda ilmo kastuu ka, oo dhimashona mar dambe ma noqon doonaan, ama waa la barooranayeen oohin xanuun, waayo, waxyaalihii hore way dhammaadeen. "Oo kanu waa sida Ilaah waa awoodaa inuu u adkeysan mid na Arkee, Carruurtiisu waxay wax ka jecel yahay, halkan ku xanuunsado muddo dhulka. From oo aragti, dhibaatooyinkeenna, innagoo dunida ka dhacay bilig bilig ah isha ah, halka nolosheena isaga la Jannada, noo farxad, waxaa ka maqnaan doona dhamaadka doonaa.
Christian Faith ayaa lagu wadaa ka dhan diimaha kale ee in ay keligiis barayaa in Ilaah waxa uu noqday nin marka laga reebo–mid ka mid ah oo naga mid ah–silco oo dhinto our dembiyadii. "[H]e loo dhaawacay xadgudubyadeenna,"Ayuu yidhi Nebi Ishacyaah (53:5), "Waxaana loo nabareeyey xumaatooyinkeenna; waa dul joogay Cadaabka ina siiyey oo dhan, dildillaaciisiina waynu ku bogsannay. "
Xusuusnow, in Ciise, qabka Ilaah, ahaa (iyo waa) dembi lahayn, Kolleyba qaba ahaa arfariirka naga wakiil ah, oo aan, tartanka aadanaha, ayaa soo furatay Xaraaradda Ciise Masiix.
Waa run in uu dhibaatada naga wakiil ah ayaa lama baabbi'in xanuun oo dhan ka nolosheena. Si lid ku ah, sida Rasuul Bawlos u qoray in uu Warqad ku Phillipians ah (1:29), "Waxaa la siiyay in ay u aawadood oo ah Masiixa idinku waa ma aha oo kaliya ay rumaysan isaga, laakiin sidoo kale isaga daraaddiisna u xanuunsataan."
Sidaas, iyada oo tijaabooyin aynu soo dhawyahay in Masiixa oo xataa waxay wadaagaan in Sharaftiisii (arki Bawlos Letter Second in Corinthians ee, 1:5). Sidaas si dhow Ciise aqoonsadaan la mid ah dhibtoonaya in xanuunkaas uu noqdo image nool isaga of a. Mother Teresa oo inta badan ka hadlay markuu arkay in Wajiyada kuwa naftiinna iyadaana, kii, waxay ka dararkii ee Calcutta baxey, wajiga aad Ciise.
Sidaas, Xaraaradda Masiixa ayaa lama baabbi'in our dhibaatada shakhsi u gaar ah, laakiin waxa loo bedelay. Sida Pope John Paul Great qoray,"In the Cross Masiix ma aha oo kaliya waa furashada u dhammaystirmi iyada oo dhibaatada, laakiin sidoo kale dhibaatada aadanaha laftiisa ayaa lagu soo furtay " (Salvifici Doloris 19).
The lagu xanuunsadaa oo Ilaah u ogolaanaya in ay u soo galeen nolosheena, marka bixiyeen in ururka la Masiixu ku xanuunsan doono on Cross ah, qaado tayada a madax furashada iyo laga yaabaa in lagu bixiyey inuu Ilaah u ah badbaadada naftiinna. Anaga, ka dibna, dhibaatada ma aha wax garad Ujeedada; la yaabka, waa hab ka mid ah helitaanka nimcada Ilaah ee. Xanuunku waa qalab kaas oo Ilaah saameyn laga yaabaa in our quduusnaanta, hab ka mid ah manjooyin ruuxiga ah ayaa dhihi kara.
The Warqad ku Cibraaniyada (5:8) Ciise wuxuu inoo sheegayaa, xaggiisa,
"Addeecid ku bartay iyada oo loo marayo waxa uu ku xanuunsaday." Oo warqad ay sii, “Waayo, Rabbigu wuxuu isaga u edbiyo kan uu jecel yahay, iyo Cadaabi wiil kasta oo uu helo. Waa anshaxa in aad leedahay si aad u adkaysataan. Ilaah wuxuu idiinla macaamiloodaa sida wiilal oo kale; waayo, waa wiilkee kan aabbihiis kama anshaxa? ... [Aabbuhu] inoo edbiya si inoo fiican u, si aannu uga qayb galno quduusnimadiisa. Wixii la joogo anshaxa oo dhan u muuqataa daran halkii ka farxin; ka dib waxa edbiyey u dhashaa midho nabad iyo xaqnimo ah kuwa lagu edbiyey u dhashaa by.” (12:6-7, 10-11)
Dhegganayd fikradda ah dhibaatada madax furashada, Saint Paul qirtay in uu Warqad Kolosay ah 1:24, "In anigoo aan jiidh lahayn dhammaystirno waxa ka dhiman ku dhex jirna dhibaatooyin Masiix aawadiis jidhkiisa ah, in uu yahay kaniisadda. "
Tani ma tilmaamayso, Dabcan, in Xaraaradda Masiixa ahaa si kasta oo aan ku filnayn. Allabarigiisa naga wakiil ah waa laftiisa in si fiican dhamaystiran iyo efficacious. Weliba, in view oo Xaraaradda, Ciise ina soo waco si ay u soo qaado our cross iyo isaga raacaan; si uu ugu duceeyo, waayo, mid kale, ku dayashada isaga of, iyada oo salaadda iyo dhibaatada (arki Luke 9:23 iyo Paul ee Letter First in Timothy 2:1-3).
Sidoo kale, in uu Letter First (3:16), Saint John qoray, "Taasaynu ku garanaynaa jacaylka, wuxuu noo dhigay naftiisa; oo innaguna waa inaynu nafteenna u bixinno walaalaheen our. "
"Kii i rumaysta, in sidoo kale shuqullada aan sameeyo samayn doonaa,Rabbiga "ayaa sheegay in; "Oo shuqullo kuwan ka waaweynna wuu samayn doonaa, maxaa yeelay, Aabbahaan u tegayaa " (John 14:12). Sidaas, Ciise dooni ka qaybgalka ee shaqada madaxfurashada kuma soo baxo lagamamaarmaan laakiin jacaylka, waxay la mid yihiin sida aabbe ah ee dunidatan u muuqataa in ay ka mid noqday wiilkiisii ​​hawlaha uu. Our duceeyaa mid kale, Oo weliba, barbaro ku dul dhexdhexaadin gaar ah oo keli ah Masiixa Ilaah la (arki Paul ee Letter First Timoteyos, mar kale, 2:5).
Si aad u hubiso, kulli wixii aannu samayn ku xiran tahay wixii uu sameeyay oo uu noqon doono wax aan macquul aheyn marka laga reebo waxa ay ka. Sida Markaasaa Ciise ku yidhi ee John 15:5, "Waxaan ahay geedka canabka ah, idinna waxaad tihiin laamihii. Kii igu jira, oo anna aan ku jiro, isagu wuu midho badan dhala, maxaa yeelay, la'aantay waxba ma samayn kartaan. "Sidaas, Waa rabitaan u gaar ah si ay u oggolaan in isaga iyo isaga in la "ka maqan,"Si ay u isticmaalaan xilli Paul ee, in Masiixu ku xanuunsan doono.
Martiqaadka inay ka qayb qaataan shaqada Masiixa ee madax furashada by midaynta dhibaatooyinkeenna, innagoo si uu u ah badbaadada iyo badbaadinta dadka kale runtii waa tacsida yaab. Saint Therese ee Penal qoray:
“In dunida, on Dadkuna subaxdii waxaana qabaa inay ka badan waxa laga yaabaa in ay dhici doonto midkood farxiya ama umaba inta lagu jiro maalinta loo isticmaalo; iyo haddii jeerba kaliya isku dayaya dhacdooyinka aan kacay dispirited. Haddaba waxaa arrin jid kale: Waxaan qabaa mid ah dhibaatooyinka iyo silica ahaa oo i sugi, oo waan soo sara kacayaa more farxadeed oo waxaa ka buuxda geesinimada more waxaan arki fursadaha of Taan jeclahayay caddaynaya, waayo, Ciise ... . Markaasaan dhunkado crucifix iyo waxa derejeeyo jiifay isagoo barkin ku annigoo u labistaan, oo waxaan ku yidhaahdeen: 'My Ciise, waxaad ku filan waad soo shaqeeyay oo ku filan ooyay inta lagu guda jiro saddex-iyo-soddon sannadood cimrigaaga on this dhulka saboolka ah. Hadda kaxee intiisa kale. ... My jeedo waa silco oo si ay ula dagaalamaan '” (Talooyinka iyo Reminisces).
Inkasta oo qaba in ururka la Rabbi Ciise ku rajo weyn yahay–In kastoo weli daran–qaba Eebe ka sokow waa qadhaadh oo madhan.
Xaaladaha kuwa, ma jiraan wax qiimo in dhibaatada, oo dunida ka waddaa–doonaya in ay ka fogaanno si kasta–ama ku eedeysay qofka uu dhaedo. Tusaale ahaan, qaar ka mid ah arkaan xanuunka iyo sida ciqaab ku tumata by Ilaah Gaalada, ama silica iyo dhimashada ugu danbeyn ka, odhan, kansarka sanbabada sida ku keeneen by la'aanta rumaysadka ee shaqsi ahaaneed. Dhab ahaan, waxaa jira dad rumaysan tahay in Ilaah ku talo rumayste kasta si ay ugu noolaadaan si buuxda xor ka xanuun iyo cudur; waa ilaa qofka go'aan u gaadho ama in Ahaanshaha masaakiinta waa dembi ah markii Ilaah ballan barwaaqo.
Baybalku wuxuu, Dabcan, gebi ahaanba ku gacansaydhay dhinacaasi tiro ka mid ah times, oo ay ku jiraan muxaadaradii ee Mount ee Matthew 5, “Waxaa barakaysan kuwa gaajaysan oo u harraadsan, waayo, caddaaladda, waayo, way dhergi doonaan,” iyo Luke 6:20, tus, "Waxaa barakaysan kuwa aad u sabool ah ...,"Iyo" Waa idiin hoog waxaa leh kuwiinna hodanka " (Luke 6:24; cf. Matthew 6:19-21; ka Letter of James 2:5).
Ayuub, kuwaas oo Kitaabka Quduuska ah wuxuu sharaxayaa sida "nin qumman oo toosan" (Ayuub 2:3), xanuun soo gaaray, dhimasho kuwa jecel yahay, iyo khasaaraha of alaabtiisii.
Mary Virgin ayaa, kuwaas oo ahaa dembi lahayn (Luke 1:28), diidmada soo gaaray, guri la'aanta, cadaadis, iyo khasaaraha of Her Son- "seef baa naftaada ka mudhbixi doonta sidoo kale,"Simecoon ayaa shaaca ka qaaday in iyada (Luke 2:35).
Yooxanaa Baabtiisaha, ka siibtey Ciise, "Qudhiisu wuxuu guntanaa dharkiisii ​​dhogorta geel ahaa," oo uu u cunay "ayax iyo malab dibadeed" (Matthew 3:4). Timothy soo gaartay nno caloosha chronic (arki Bawlos Letter First in Timothy 5:23); iyo Paul lahaa inuu ka tago co-worker, Torofimos, ka danbeeya ay sabab u tahay cudur (arki Paul ee Second Letter Timoteyos 4:20).
Waxaa intaa dheer, marka Saint Peter jirrabeen Ciise ay iska iloobaan Xaraaradda ah, Ciise baa u jawaabay, "Gadaal iga mar, Shaydaanku! Waxaad tahay dhibka ku ah ii; maxaa yeelay, ma aad tahay dhinaca Ilaah, laakiin nin " (Matthew 16:23).
In runta, isku day kasta si ay u helaan ammaan, halka Goldogob Cross waa jinka ee dabiiciga ah (cf. Tim Staples, xiganaya Fulton J. Sheen, "Jawaabaha Catholic Live" barnaamijka radio [February 24, 2004]; laga heli karaa catholic.com).
Near dhamaadka naftiisa, isla Peter ah, kuwaas oo mar lagu canaantay by Ciise, waayo, isaga oo raba in ay ka fogaadaan dhibaatada, sheegay in kuwa aaminka ah:
"In this [dhaxalka jannada] waa inaad ku faraxdaan, hadda in kastoo wax yar halka laga yaabaa in aad u xanuunsataan tijaabooyin kala duwan, si karana, ee iimaanka, uga sii qaalisan dahabka oo in kastoo dab lagu tijaabiyo halaabin, Waxaa laga yaabaa in u badiso mahad iyo ammaan iyo ciso markii Ciise Masiix la muujiyo. " (Butros Letter First 1:6-7)
Sidaas, Waxaa waa u qalantaa?
Si aad ka jawaabto su'aashan in, waxaan kartaa Saint Paul ee uu Warqad Rooma 8:18: "Waxaan ku tirinayaa in waxyaalaha wakhtigan la joogo lagu xanuunsadaa aan dib istaahilin in lala simo ammaanta waa in laynoo muujin doono la."
In la eego in, waa in aan marnaba lumin arkaan abaalmarinta: in maalin maalmaha ka mid, nimcada Ilaah, kasta oo halkan ku arki doontaa Rabbi Ciise Masiix in uu Kingdom; bal eeg wejigiisa iska Ifto Yuuna; Codkiisa maqli malaa'igaha; iyo dhunkado isagoo gacmaha iyo cagaha xurmada, dhaawacmeen aawadeen. Ilaa maalintaas, waannu naadinnaa karaa sida Saint Francis of Assisi in Jidka ee Laanqayrta, "Waxaan Waxaad Khayrja, O Masiix, iyo Inaan kugu barakayn, maxaa yeelay by Your Cross Quduuska ah waad furtay dunida. Aamiin. "